गृहकार्यहरू वा केटिले कसरी स्तरबाट सफा गर्ने
हाम्रो अपार्टमेन्टमा, पूर्व-फिल्टरिंग वा उबलने बिना ट्याप पानी पिउने सिफारिश गरिएको छैन। यदि तपाइँ फिल्टरमा पैसा खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईंले मापनमा पैसा खर्च गर्नु पर्छ।
यो बयान केवल ती ठाउँहरूका लागि मान्य हो जहाँ पानी "कडा" हो, उदाहरणका लागि यसमा धेरै खनिज लवहरू भंग गरिएका छन्। मूलतः, यी शहरहरू जहाँ कुएं पानी निकासीको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यदि तपाईंको नयाँ केफेले एक हप्ता भित्र गन्दा स्याउ तहमा ढाकिएको छ भने, त्यसपछि तपाइँले ट्यापमा पानीको कठोरता कम गर्नका लागि उपायहरू लिनुपर्छ। सबै भन्दा राम्रो चीज एक राम्रो फिल्टर खरीद गर्न को लागि पानी को नरम। र हरेक 3-6 महिना परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसपछि स्केल धेरै कम हुनेछ, र केतले कम प्रायः सफा गर्नु पर्छ। यो आकार सङ्कलन सुरु हुने बित्तिकै, फिल्टर परिवर्तन गर्न राम्रो छ। यसैले पानी सफा छ, र चिया स्वादिष्ट छ।
तर के भयो यदि एक मोटो, कछुआ-खोल कोट क्या केटल मा दिखाई दि्छ? तहबाट क्याटलल सफा गर्ने? वास्तवमा यहाँ केही पनि कठिन र भयानक छैन। मुख्य चीज तपाईं के केटलमा कुन सामग्रीबाट सम्झनुहुन्छ। प्लास्टिकको टीपोटले एसिड संग सफाई सहन सहन सक्छ, तर क्षार संग छैन। धातु teapots दुवै को सामना गर्न सक्छन्, तर पानी मीटर को रबड गैस्कट तपाईंलाई तपाईंलाई तल र प्रवाह सुरु गर्न सक्छन्। र बलियो पदार्थहरूले केतलको ताप्लेट तत्वलाई खराब पार्न सक्छ। सोडा सर्वोत्तम एक गैर बिजुली केतली संग सफा गरिएको छ।
केटिले मापनको हटाउन गाह्रो हुने छैन। प्रश्नको लागि: "केटिले बन्द स्केल कसरी धोयो?" - म धेरै जवाफहरू छन्।
म सम्भव तरिकाहरू सूचीबद्ध गर्नेछु:
मकोनिकल। यो पद्धति एक पतली परत को लागी उपयुक्त छ (बस बनाइयो)। हामी राम्रो ब्रश, सोडा को एक सिरप वा हल्का डिटर्जेंट लिन्छौं र हामी केतलीलाई चमक गर्न चाहन्छौं। दुर्भाग्यवश, यदि घोटाला पुरानो छ र परत लगभग क्यातल को पर्खालहरुमा वेल्डेड गरिन्छ, यो विधिले तपाईंलाई मद्दत गर्दैन।
रासायनिक मार्ग। यो दुई उप-वस्तुहरुमा विभाजित छ:
पसल रसायन विज्ञान - यी भनेको हो कि तपाई सजिलै घरको रसायन विभागमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। सिफारिसहरू, कस्तो राम्रो उपकरण, मलाई आशा गर्नुहुन्न। म ड्युमिमीको लागि समाधान प्रयोग गर्दैनु। तर काम र केही मित्रहरुका साथीहरूको समीक्षाहरू निकै सस्तो र राम्रो पैसा छन्।
गृह रसायन विज्ञान। मुख्य अंतर भनेको सामान्य सामान प्रयोग गरिन्छ। सफाईको लागि, तपाईं दुवै एसिड र एल्कली प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई एसिड मन पर्छ।
कसरी सिट्री एसिड प्रयोग गरेर क्याप्ले सफा गर्नको लागि नुस्खा:
साइट्रिक एसिडको 15 ग्राम (वा एक चम्मच) 1 लीटरमा चिन्ह लगाइयो।
यसलाई उकालो पार्नुहोस्।
पानी निकाल्नुहोस् र यसलाई कुल्ला गर्नुहोस्।
नयाँ पानी खानुहोस् र फेरि फोडा गर्नुहोस्।
पानी खानुहोस्। र सबै, केतली कामको लागि तयार छ।
यदि स्केल हराउदैन भने प्रक्रिया पछि दोहोर्याइयो।
सिरका को एक भाग को गणना बाट एसिटिक एसिडको समाधान 3-5% पानीको तीन भागमा समाधान गर्नुहोस्। एसिड को एकाग्रता मापन तह को आधारमा बदल्न सकिन्छ।
समाधान सुन्नुहोस्। खडा गर्नको लागि 10-20 मिनेट पर्खनुहोस्। फेरि दोहोर्याउनुहोस्।
पानी निकाल्नुहोस् र केतली कुल्ला गर्नुहोस्।
सोडाको समाधानको साथ यो बिजुली केतली धोएर राम्रो छ , तर सामान्यतया:
5-10 ग्राम प्रति लीटर सोडाको समाधान कोतलमा राखिएको छ।
यो फोमको साथ फोडा सुरु हुने बित्तिकै, प्लेटबाट हटाउनुहोस्।
आधा घन्टाको लागि खडा गर्न छोड्नुहोस्।
उबलने (2 बिन्दुहरू) पछि उत्कृष्ट प्रभावको लागि, केटिले लगभग एक घण्टाको लागि खडा गर्न राम्रो हुन्छ, त्यसपछि कुल्ला (4-5 बिन्दुहरू)।
भौतिक बाटो। वा केटिले खतराको साथ केहि मिनेटमा मापनबाट क्याफेले सफा गर्न कसरी। स्मम एक ब्लम हो जब देखि, जब गर्मी मा विभाजित हुन सक्छ। म यो विधिलाई सिफारिस गर्दैन, यो अति नैतिक र खतरनाक छ। एक बिजुली केतली को मामला मा , तपाईं न केवल केतली खराब गर्न सक्छन्, तर तारिंग पनि। केवल केहि सेकेन्डको लागि बिना पानीमा यसलाई घुमाउनुहोस्, र स्क्रिन चिप गर्न सुरु हुन्छ। तर राम्रो तरिकाले एक रासायनिक विधि प्रयोग गर्नुहोस्।
मलाई आशा छ कि मेरो लेखले तपाईंलाई कसरी केटिले सफा गर्नको प्रश्नको जवाफ पाउन मद्दत गर्यो।
प्रशीतन "Vestel": विशेषताहरु र समीक्षा
माइक्रोवेव: आपरेशन, उपकरण, रोचक तथ्यहरु को सिद्धान्त
स्टेनलेस प्यान्स: संरचना र नर्सिङका विशेषताहरू
रेफ्रिजरेटर Indesit DF 5200 W: निर्दिष्टीकरण र खरीददार समीक्षाहरू
रोजटर - के यो छ? टोस्टर वा घट्टे - के फरक छ?
सब्जिहरु र फलहरु को सफाई को लागि चाकू: किस्म र सुविधाहरु
Chlorella - Chlorella शैवाल छ ...
राम्रो दर्दनाक बन्दूक कसरी चयन गर्न
सेन्ट-पीटर्सबर्ग को रहस्यमय र रहस्यमय स्थानहरू
छाँट्दछ संग चिकन स्तन: पकाउने लागि धेरै विकल्प
के डमी "Avent" राम्रो?
कमर Corset कमर ट्रेनर: ग्राहक समीक्षा र डाक्टर
निःशुल्क नियुक्ति: वर्णन, वर्गीकरण
कसरी पैन मा घरेलु पनिर बाट पनीर केक खाना पकाउनु? विभिन्न व्यञ्जनहरु
अजगर - विकास पर्यावरण। शुरुआती लागि अजगर 3
के तपाईंको प्रेमी मकर छ भने?
Zverev Sergey (जूनियर)। जीवनी र छोरा सेलिब्रिटी विवाह